Phonononga iNdalo kwiNdawo yokuFumana yale mihla yeBhadi kwiiCatskills
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguErik & Cristin
Ngena ngeengcango zamandulo ungene kwisisele sonyaka esine soguqulo olusekelwe kwindawo yomlilo yamatye. Imithi eveziweyo yesilingi ephothiweyo yongeza incasa yerustic. Kukho ikhitshi langoku eligcweleyo kunye nendawo eninzi yokonwabisa usapho kunye nabahlobo. Ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela zikumgangatho wesibini wendlu zibonelela ngeembono kwiinkuni ezijikeleze indlu.
“Ikhaya lethu libekwe kwi-3 yeehektare zabucala zehlathi phakathi kweMohonk Mountain kunye neCatskills. Ngasemva kwendlu enkulu ibandakanya ipatio yebluestone enetafile yokutyela kunye nedesika ephezulu enezitulo zokuphumla kunye nepropane grill. Bona eminye imifanekiso @bonehollowhouse”
“Ikhaya lethu libekwe kwi-3 yeehektare zabucala zehlathi phakathi kweMohonk Mountain kunye neCatskills. Ngasemva kwendlu enkulu ibandakanya ipatio yeb…
- Erik & Cristin, umbuki zindwendwe wakho
4.97 (iingxelo zokuhlola 129)
Ibhari ikufuphi neStone Ridge, iHigh Falls, iKingston, iNew Paltz, iWoodstock, iSaugerties, kunye neHudson. Yonwabela imisebenzi yangaphandle efana nokutyibiliza, ukukhwela intaba, ukunyuka, ukukhwela iphenyane, kunye nokuqubha. Iidolophu ezingqongileyo zizele ziivenkile zasekuhlaleni kunye neendawo zokutyela.
Umgama ukusuka eOld Rhinebeck Aerodrome
Umbuki zindwendwe ngu- Erik & Cristin
UErik & Cristin yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Accord